I-Indian Reap cambodia -indawo, iihotele, imozulu, isikhululo seenqwelomoya, izinto zokwenza
I-Mina Reap, eCambodia
I-Mina Reap yidolophu enkulu yePhondo lase-Mina Reap kumantla ntshona eCambodia. Yidolophu edumileyo yokuphumla kunye nesango lommandla weAngkor.
I-Mina Reap namhlanje njengeyona ndawo ithandwayo yabakhenkethi inehotele ezininzi, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, iindawo zokutyela kunye namashishini ahambelana nezokhenketho. Oku kubaluleke kakhulu kukude kufutshane neetempile zaseAngkor, eyona ndawo ithandwa kakhulu kubakhenkethi eCambodia.
Uphi u-Mina Reap?
I-Indian Reap, ngokusemthethweni i-Minareap liphondo laseCambodia, elikumantla ntshona eCambodia. Umda kumaphondo e-Oddar Meanchey emantla, i-Preah Vihear kunye neKampong Thom empuma, iBattambang ngasemazantsi, kunye neBanteay Meanchey entshona. Idolophu enkulu yayo kunye nesona sixeko sikhulu yi-Indian Reap. Yeyona ndawo iphambili yabakhenkethi eChambodiya, njengoko sesona sixeko sikufutshane kwiitempile ezidumileyo zeAngkor
Kutheni undwendwela i-Mina Reap?
Okokuhlaza, indlela yokuphila kunye nenkcubeko. Kodwa esona sizathu sokuza eIndi Reap kukutyelela iitempile ezintle zeAngkor Wat, ilitye lesikhumbuzo lesona likhulu ehlabathini, kwindawo enobukhulu obuziihektare ezili-162.6. Ekuqaleni yayakhiwe njengetempile yamaHindu enikezelwe kuthixo uVishnu kubukhosi baseKhmer, yaza yaguqulwa yenziwa itempile yobuBuddha ukuya ngasekupheleni kwenkulungwane ye-12.
Ngaba ukuvuna kwe-Mina kukhuselekile?
I-Mina Reap mhlawumbi yeyona ndawo ikhuselekileyo eKhambodiya. Yaba ngumkhenkethi wabakhenkethi kunye nabathengi ngokufanelekileyo. Ngelixa ulwaphulo-mthetho lwezilwanyana ezincinci ngelishwa lungaqhelekanga, ukuba umntu unengqondo zazo malunga nabo uya kukhuseleka.
Uza kuhlala ixesha elingakanani e-Mina Reap?
I-Siem Reap ayinakugutyungelwa ngosuku olunye. Uya kudinga ubuncinci iintsuku ezintathu okanye ezine ukugubungela isibhakabhaka esikhulu seetempile zaseAngkor kunye nezinye izinto ezikuloo ndawo.
Utyelele nini i-Mina Reap?
Iiarhente zokundwendwela ngenzondelelo ziya kukuxelela ukuba alikho ixesha elibi lokutyelela i-Mina Reap. Loluphi uhlobo lwenyani, lo gama uguquguquka kwindlela olisebenzisa ngayo ixesha lakho xa sele ufikile apha.
Ixesha lonyaka elomileyo liqala ngoDisemba ukuya ku-Epreli, ngeli xesha i-monsoon ukusuka ngoMeyi ukuya kuNovemba izisa imozulu emanzi kunye nokufuma okuphezulu.
Elona xesha lilungileyo lokundwendwela i-Mina Reap ngoDisemba nangoJanuwari, xa iintsuku ngokuqinisekileyo zinelanga kwaye zomile. Yazi nje ukuba eli lelona xesha liphezulu labakhenkethi, ke uya kulifumana lixinekile kuyo yonke indawo kwaye amaxabiso aya kuba phezulu.
Lude kangakanani ulwandle ukusuka kwi-Mina Reap?
I-Mina Reap ayinalo unxweme. Amanxweme aseCambodia ahlala engahoywa ngenxa yeThailand. Kodwa ngokuthe ngcembe, ngokuqinisekileyo, iziqithi ezibukekayo zelizwe kunye neentlabathi ezimhlophe eziqaqambileyo zaseSihanoukville ziyaziwa ngabathandi beelwandle zehlabathi.
Umgama osuka kwi-Mina Reap ukuya eSihanoukville ujikeleze i-532km (i-350 miles) ngomgaqo. Kungenxa yohambo olude lokuhamba (iiyure ze-10-15 ngendlela) ukuba uninzi lwabahambi lukhetha ukungayi eSihanoukville konke konke. Inketho ekhawulezayo kukuthatha indiza, ethatha iyure ye-1.
I-Sod Reap vs Phnom Penh
Phakathi kweendawo ezimbini ezidumileyo eCambodia, i-Mina Reap ibonakala njengendawo engcono yokuthatha umhlalaphantsi. Ngelixa i-Phnom Penh imele inguqu, uSimo Reap uthimba ubalulekile wolondolozo. I-Mina Reap inokubonakala njengedolophu enamanzi angasemva xa kuthelekiswa nePhnom Penh malunga namathuba orhwebo.
Mina ukuvuna kwi-phnom penh: 143 yeekhilomitha (i-231 km)
Xa usuka ePhnom Penh uye kwi-Sodivuna une-4 inketho ezahlukeneyo:
Ungathatha ibhasi - iiyure ezi-6
Chitha ngaphezulu kwaye uthathe iteksi - iiyure ezingama-6
Bhukisha inqwelomoya - imizuzu engama-50
Thatha isikhephe esiwela iTonle Sap Lake- 4 ukuya kwiiyure ze6
I-Pia Reap eya eThailand
Umgama wokuhamba ngeBangkok malunga ne-400 km.
Phakathi kwezi dolophu kusebenza ezinye iinkampani zebhasi ezinokuthenjwa, kwaye ungathatha:
Ibhasi engqalileyo ukusuka eSky Reap ukuya eBangkok. (I-6 ukuya kwiiyure eziyi-8)
Bhuka inqwelomoya-iyure e-1
I-Pia Reap eya eVietnam
Umgama wokuhamba ukusuka eSaigon ukuya eSiiv Reap imalunga ne-600 km ngomhlaba.
Ukusuka eH Ho Chi Minh ungahamba:
Ngebhasi (iiyure ezili-12 ukuya kwezi-20, kuxhomekeke ekumeni ePnom Penh)
Ungabhukisha inqwelo moya ngokuthe ngqo (iyure ye-1)
Ihotele yeRiv Reap
Kukho amakhulu Ihotele e-Indian Reap. Yesiko okanye yanamhlanje, kuhlahlo-lwabiwo mali oluncinci okanye olungenamda, ukusuka kwindlu yeendwendwe ukuya kwiihotele ezi-5, wonke umntu uya kufumana ulonwabo.
Ikhowudi yesikhululo senqwelomoya: REP
ukusuka kwisikhululo senqwelomoya ukuya eAngkor Wat: Imizuzu eyi-17 (5.8 km) ngendlela yeSikhululo senqwelomoya
ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya embindini wedolophu: Imizuzu engama-20 ukuya kwengama-25 (10 km)
Xa uhamba umgama we-9km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Indian Reap ukuya kumbindi wesixeko, unokukhetha i-3:
Siem ukuvuna isikhululo seenqwelomoya